Iifonti ezingama-25 zecalligraphy | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti ezibhalwe ngesandla zisisixhobo esifanelekileyo senani elikhulu leeprojekthi ezibonakalayo. Nangona kunjalo, bakwanazo neengxaki ezenza ukuba zingacetyiswa kangako ngokwamatyala kunye neemeko. Uninzi lwabaqulunqi begraphic bagqiba kwelokuba bangabahoyi rhoqo ngenxa yokoyika ukwenza kube nzima ukuhambisa imiyalezo yabo. Azikho ngaphandle kwesizathu, kwaye zezi ntlobo zeefonti zihlala zibonelela ngendlela ebonakalayo, iingxaki ezininzi ngokubhekisele kufundo. Nangona kuyinyani ukuba ayizizo zonke ezivelisa le ngxaki, okanye ubuncinci zingalingani, kuhlala kufanelekile ukuba sizame lumka xa uzisebenzisa kuyilo lwethu. Ukuba ulapha kungenxa yokuba ngokuqinisekileyo ujonga ukubanakho kokuzisebenzisa kwiprojekthi. Ukusuka apha, ndiyakukhuthaza ukuba uye emsebenzini, nangona kubalulekile ukuba unezinto ezithile engqondweni ngaphambi kokuba ungene emsebenzini.
Namhlanje sivelisa iphakheji eluncedo kakhulu yeefonti ezibhalwe ngesandla kunye nesikhokelo esincinci sokwenza kwaye uzenze ngobuninzi bazo. Kuba ngokuqinisekileyo zinokusetyenziswa ngaphandle kokwenza uphazamiseko ekuhanjisweni kolwazi kwaye zinokubonelela ngexabiso elongeziweyo kuyilo nakwimiqondo yethu. Masiqale ekuqaleni!
1 Umcimbi wokufundeka
2 I-Italic ayihambelani nokubhalwa ngesandla
3 Ubudlelwane kunye nebranding yabasebenzi
4 Iifonti ezibhalwe ngesandla kunye nokwenza ugxininiso
5 Iifonti ezibhalwe ngesandla njengezinto zokuhombisa
6 Iingcebiso eziphambili
Ukuba ezi ntlobo zemithombo zibonakaliswe ngento ethile, kungenxa yokuba zinjalo nzima ngakumbi kuneminye imithombo. Oku kubangela ezinye iingxaki kuba zifuna ingqalelo engakumbi kunye noxinzelelo lokufunda umxholo ngokutyibilikayo. Ezinye iileta zihlala zibhidaniswa nabanye kwaye ezi ntlobo zeengxaki zibangela ukuba umfundi aphulukane nomdla kumyalezo kwaye ke umtsalane kuyilo lwethu luyancipha. Ezi zezona zizathu ziphambili zokuba kutheni ezi ntlobo zeefonti zisetyenziswa rhoqo kwaye zinqabile phakathi koluntu loyilo. Kungenxa yoko le nto behliselwe ngandlel 'ithile kwindiza yokuhombisa kwaye ngendlela encitshiswe kakhulu ekubunjweni. Nangona kunjalo, kufuneka sicace gca ngendima yayo kwezi meko. Xa ifonti ebhalwe ngesandla isetyenziswa njengesincedisi sokuhombisa, ikwaxhasa umyalezo kunye nomxholo ofihliweyo emva koyilo lwethu, enyanisweni unenjongo ephindwe kabini: Ukuhonjiswa kwaye kwelinye icala kunxibelelwano. Kubalulekile ukuba xa uthatha isigqibo sokusebenzisa ezi ntlobo zemithombo, ungaze ulahlekelwe ngumbono wokumodareyitha. Kuya kufuneka sifunde ukusebenzisa idosi kwaye xa siyisebenzisa, kufuneka sicace gca ukuba ifonti yethu kufuneka ihambelane ngokugqibeleleyo nomyalezo uyilo olunqwenela ukuluhambisa. Asikwenzi oku kuphela ukunqanda ukufundwa okuthile kunye neengxaki zokutyibilika, kodwa kwanokuba ifonti ebhalwe ngesandla inamandla okanye amandla okubamba umfundi kwaye abambe ingqalelo yabo. Gcina ukhumbula ukuba ukuba usebenzisa ezi ntlobo zefonti kuyilo lwakho lonke, ifonti ebhalwe ngesandla iya kuphulukana nawo onke amandla anawo ukumodareyitha. Nje ukuba ibonakale kwigama ngalinye elilelokwakha, abayi kuba namandla okanye badibane nomfundi. Ngandlela thile, ngekhe bakwazi ukuchukumisa okanye ukubamba ingqalelo yomsebenzisi.
I-Italic ayihambelani nokubhalwa ngesandla
Phantse njengentsomi, umxholo wefonti ebhalwe ngesandla uhlala unxulunyaniswa ngengqondo kunye neetalic. Akumangalisi ukuba le yenzekile, kufuneka sikhumbule ukuba kukho inani elikhulu lamagama abhalwe ngesandla ngaxeshanye anento yokwenza nokuba ngumalukeke. Nangona kunjalo, ayisiyiyo into eyindalo yomxholo wesandla. Ayizizo zonke iifonti ebhalwe ngesandla eziqalekisayo, nokuba zingasondelanga. Eyona nto iphambili kolu hlobo lwefonti, njengoko igama layo libonisa, kukuba kubonakala ngathi kunjalo ezenziwe ngezandla. Ayizizo zonke iileta ezenziwe ngesandla ezinesichaso, akunjalo? Lixesha lokuba ufunde ukwahlula zombini ezi ngcinga. Ngokwenyani, iifonti yokubhala ngesandla zinokuba neempawu ezahlukeneyo kunye neembonakalo, ngenxa yoko kukho ezinye iindlela kunokusebenzisa amagama akekeleyo. Kuya kufuneka wenze umgudu wokukhetha eyona ifanelekileyo. Hlalutya ibhanki enkulu yemithombo kwaye uzame ukuqonda ezo zabelana ngendlela efanayo neshishini lakho. Kodwa nceda ungakhethi iifonti eyona nto iphambili kuyo ukuba ikekeliswe. Khangela kwaye uhlole Amathuba ngakumbi kunye neentlobo ngcono. Xa sijikela kwezi ntlobo zemithombo, kungenxa yokuba kufuneka sisebenzise "ubuntu" obuncinci kwincoko yethu ebonakalayo. Ungalifumana eli candelo kwezinye iindlela ezahlukeneyo. Umzekelo, ifonti ngokuqinisekileyo ebonakala imdaka inokusebenza kakuhle kwiprojekthi yakho. Ubume bakho bunokufuna idosi ethile yesiphithiphithi ngemithombo esetyenzisiweyo kwaye ke oku kuyinika intetho ngokusondela okukhulu, ubuntu kunye nokunyaniseka. Uninzi lwamagama acetyiswayo ngaphakathi kwikhathalogu ebhalwe ngoonobumba abahlukileyo ngohlobo lwesixhobo esiwatsalile: ipensile, usiba, isiphawuli ... Ukuhlalutya eli nqaku ukuzisebenzisa kwiiprojekthi zakho kunokuba yinto enomdla. Okukhona ubona, kokukhona inqanaba lakho lolwazi malunga nabo kwaye uya kufumana umahluko omkhulu. I-Nuances ebonakala ngathi ayiqwalaselwa kodwa nangona kunjalo yenza umahluko obalulekileyo.
Ubudlelwane kunye nebranding yabasebenzi
Iifonti ezibhalwe ngesandla zisetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwimeko yeempawu zobuqu okanye uphawu lomntu. Isizathu silula, kwaye olu hlobo lweeleta lubonelela ngemvakalelo yokufudumala, ukusondelelana kunye nokusondela. Bayakwazi ukucebisa ukuba bunjani ubuntu bomntu osemva kwelogo. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba uthathe ingqalelo kwiimpawu ofuna ukuzenza kwisigaba sokukhetha kunye nokuvavanya. Kuya kufuneka ukuba uchonge ezona mpawu ziphambili zegama lakho kwaye uzifumane kwifonti oza kuyisebenzisa. Oku kufuna ubuntununtunu kodwa kusebenza ngokukuko. Kukho inqaku ekufuneka uligcinile engqondweni, kwaye kunjalo Kuya kufuneka uphephe ukusebenzisa ifonti ebhalwe ngesandla njengoko injalo. Ukusetyenziswa kwefonti ethathwe ngokuthe ngqo ebhankini akwenzi nzuzo kwaye kukwazenzekelayo. Kubalulekile ukuba ufunde ukubeka kancinci ubuntu bakho kunye nobuchule kuyo. Yiguqule, phucula amanqaku akho ngokusekwe kuhlobo lohlobo osebenza kulo. Kuya kufuneka uyiphephe kancinci, kuba ukuba uyayenza ngokungalinganiyo ubeka emngciphekweni wokubuyela kukungafundeki. Ukuba unethuba lokuqesha uchwephesha, ifonti yesiko iya kuba ngcono kakhulu, nangona ayinguye wonke umntu onokubakho. Ngokukodwa xa sijonge amanqanaba okuqala ophuhliso lweshishini okanye uphawu. Ukuba uyalithanda ilizwe le typography unokuyila eyakho ifonti esekwe kwiimfuno zebrendi yakho. Ngaphambili kufuneka wenze uyilo olunamandla lomxholo kwaye uhlalutye iifonti ezininzi ezinomtsalane kuwe. Unokusebenzisa ikrafigraphy yakho. Ufuna kuphela usiba nephepha, bhala igama ofuna ukumela ishishini lakho kwaye uliskene. Uya kuthi ke ube nakho ukuqala ukusebenza ngokwamanani ngale sketshi kunye nenkqubo yoyilo lochwethezo olukhethekileyo.
Iifonti ezibhalwe ngesandla kunye nokwenza ugxininiso
Kukho iintlobo ngeentlobo zamacebo kunye nobuchule ukuze ubonelele ngamandla kwi-aksenti okanye kugxininiso kulwakhiwo. Phakathi kwezi ndlela sifumana umbala. Njenge-axis sisebenzisa i imibala indibaniselwano kwaye senza utshintsho kwiithoni kwiindawo ezithile ukuze ngale ndlela i-asynchrony yenzeke kwaye umyalezo uzuze ngamandla nasemandleni. Esinye sesi sicwangciso sisekwe kwi- ubungakanani. Kuya kwanela ukuguqula ubungakanani bento eyinxalenye yokwakhiwa, ngale ndlela siza kusophula isingqisho. Endaweni yoko, siza kwenza isingqisho ukusuka kwikhefu kunye nemvisiswano eyenza ukuba konke kuvisisane ngakumbi. Njengoko ubona, umgaqo osisiseko sayo yonke le ntshukumo iyafana: Thatha ingqalelo kwaye ngandlela thile bamisele uluhlu oluphathekayo nolubonakalayo olunceda umfundi ukuba ajolise ingqalelo yabo kwizinto ezithile. Ukusuka kwesi sicwangciso sokujolisa kuya kuba lula kakhulu kuthi «phatha»Ulwazi, dlala ngalo kunye nokwakha intetho enamandla kunye neyoyisayo. Eyona njongo iphambili yayo nayiphi na intetho ebonakalayo kukuhlala ngaphakathi kwimemori yombukeli. Ngale ndlela siya kuqinisekisa ukwenza ubudlelwane naye kwaye ke siphindaphinde uphawu lwethu. Ubuchwephesha abukho ngaphandle kwaye ke abubalekanga kwesi sicwangciso. Sinokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeefonti ukubonelela ngempembelelo kumbukeli, okanye ngamanye amaxesha kwanele ukusebenzisa uhlobo oluthile lochwethezo ngeendlela ezahlukeneyo (ngesibindi, nokuba ngumaluki ...). Nangona uninzi lwabayili begqibe ekubeni bahlale kude nale ndlela kucetyiswa ngayo. Nangona kuyinyani ukuba kubalulekile ukuba unencasa ethile kunye novakalelo lokudibanisa imithombo emibini eyahlukeneyo. Nangeyiphi ndlela, akucebisi ukusebenzisa kakubi obu buchule nokuba ukusuka kwifonti. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ifonti ezintathu ezahlukeneyo kuyilo olunye. Ungadinga ukuziqhelanisa ukuqala ukuqonda esi sicwangciso. Ukusuka apha ndiyakumema ukuba uyizame kwaye uyisebenzise.
Iifonti ezibhalwe ngesandla njengezinto zokuhombisa
Olunye lweempawu ezibalaseleyo zolu hlobo lwefonti kukugqobhoza kwemigca, isitenxo semithamo kwaye ngokuqinisekileyo ukubakho rhoqo kweemilo ezijikeleziweyo kunye ezintle. Ngezi zizathu, ifonti ebhalwe ngesandla inokugqibelela ukuyila nokuphuhlisa kuyo, into yokuhombisa ehambelana nelogo okanye ukwakheka. Nangona ingaqhelekanga kakhulu, inokuba sisicwangciso esibonelela ngokutsha, ukudibana kunye nobuhle kulwakhiwo.
Sukuzisebenzisa kububanzi besicatshulwa: Iileta ezibhalwe ngesandla kulula ukuzidibanisa nokudibanisa, ke ngoko kubalulekile ukuba sikuphephe okokuqala ukuzisebenzisa kwimibhalo emininzi. Kuya kufuneka sizame ukunciphisa ukusetyenziswa kwayo kwiimeko ezizodwa okanye ukunciphisa indawo yokubhaliweyo. Ngaphandle koko baya kuphulukana nefuthe kwaye mhlawumbi babe sisicatshulwa esingamenywanga ukuba sifundwe. Kuyacetyiswa kakhulu ukuba silubeke olu hlobo lweefonti kumabinzana ancitshisiweyo, ngamanye amaxesha ukuqaqambisa igama eliphambili (ngamanye amaxesha ileta) ingaphezulu ngokwaneleyo kwaye isiphumo sayo siyamangalisa ngakumbi, siyasebenza kwaye siyasebenza.
Imvelaphi kunye nokwahluka kwesicatshulwa: Kufuneka sifunde ukuyikhathalela umahluko. Ingakumbi ukudlala ngeethoni zoonobumba kunye nemvelaphi. Eyona nto intle kukuba ngaphakathi kweendawo okanye iitrayi zetekisi kukho iyunifomu okanye ubuncinci umbala ongafihliyo. Ukuba imvelaphi inefoto, kuyacetyiswa ukuba sizame ukusebenzisa uhlobo oluthile lokufiphala ukuphucula ubume. Gcina ukhumbula ukuba ifoto ininzi kakhulu kwaye i-shades zayo zisasazwa ngengozi kwiindawo ezinomahluko omkhulu kwaye zincinci kwaye zenzeka ngokukhanyisa. Ke ngoko, kuya kufuneka uzame ukukhetha kakuhle ukuba yeyiphi eyona nto ilungileyo, ukukhanya, kunye nemvelaphi.
Ubungakanani: Kuya kufuneka uzame ukunika iifonti yakho ebhalwe ngesandla ubukhulu obuphakathi kobukhulu obuphakathi kunye obukhulu. Oku kuyakwenza ukuba ukufundwa kube lula kakhulu kumbukeli kwaye kuya kubonakala ngakumbi ngokubonakalayo nakwithuba elifutshane lexesha.
Thatha isitokhwe, ngaba kufanelekile? : Ukubandakanya iifonti ezibhalwe ngesandla kunothotho lweziphumo kwaye kubandakanya uthotho lweemeko kulungelelwaniso kunye nolungiselelo lwendawo kunye nokusetyenziswa kwemibala. Kukho amaxesha amaninzi xa sigqibile ukwakheka okujongeka kukuhle, siye sagqiba kwelokuba kungangumbono olungileyo ukubandakanya ifonti ebhalwe ngesandla. Ingxaki kukuba ngokubandakanya ifonti enomdla kuthi, siqala ukubona ukuba ayisiyondlela ebukekayo okanye efundekayo njengoko besilindele. Emva koko siqala ukusebenzisa izicwangciso ezichazwe kumanqaku angaphambili kodwa siyaqonda ukuba kufuneka sihlengahlengise konke ukwenziwa. Kule meko, ngaba kunenzuzo? Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kufuneka inxibelelane noyilo lwengcinga esiyenzileyo. Kule meko ayinamsebenzi kwaphela ukuba "siyayithanda" i-aesthetics yayo. Ukuba isisusa kude nengcaciso yoyilo lwethu, kufuneka siyilahle le ngcamango.
Ibhalansi yombala, indibaniselwano: Ukuba sitshintsha iifonti ebhalwe ngesandla kunye nezinye iintlobo zeefonti, kufuneka sifunde ukudlala kwinqanaba lombala. Singawukrwelela lo mahluko kutshintsho lweefonti ngokwahluka kwe-chromatic, kunye nokuthelekisa kwinqanaba lobungakanani okanye isitayile sefonti. Ukuba singadlala ngemibala ehlanganisiweyo yenkampani yethu okanye siyitshintshe isebenze umzekelo ipowusta yentengiso okanye ifuthe kwisilogeni, iziphumo ziya kuba zezona zinempumelelo.
Ukuba unamathandabuzo malunga nesiphumo osikhangelayo, kuyacetyiswa ukuba uzame ukuphuhlisa iindlela ezahlukeneyo zokuyila kunye neenkqubo zokuyila ngezinto ezahlukeneyo. Unokufumana iifomula ezahlukeneyo ezitsala wena okanye umxhasi wakho ukuba usebenzela umntu wesithathu. Kule meko akukho nto ingcono kunokuya kuhlalutyo olunzulu ngakumbi. Ngokukodwa ukuba sisebenza kwilogo okanye into ethile yesazisi seshishini. Irizothi ukuya intengiso yemagrafu kunokuba yindlela elungileyo yokufumana iimpendulo esizifunayo. Sinokuphinda sisebenzise uyilo ngalunye kwixesha elizayo abaya kuhlala kulo kwaye ngale ndlela bathathe isigqibo ngokusekwe ekusebenzeni kwabo kwaye babone ukuba zeziphi na izisombululo eziluncedo ngakumbi kwiinjongo ezibekiweyo. Iimpawu ezilukhuni zinobunzima ngakumbi xa kufikwa kumiliselo kumgangatho omncinci okanye kubukhulu. Kuya kufuneka uqinisekise ukuba iyafundeka kwaye iyabonakala ngokulula.
Njengesiphelo kufuneka ukhumbule ukuba uhlobo lohlobo olubhalwe ngesandla lunokuboniswa iintlobo ezahlukeneyo kunye neendidi ukuze ikwazi ukumelana neeprojekthi zeentlobo ezahlukeneyo. Ukuchwetheza ngesandla kusetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwiiprojekthi zoyilo lwegraphic, uyilo lomhleli, uyilo lwewebhu, kunye neeprojekthi zokumamela. Xa usenza isigqibo ngezi sisombululo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba kuya kubakho iimeko ezithile okanye amanqaku aza kuthathelwa ingqalelo ukuze afumaneke ngokupheleleyo ngokwakhiwa kwakho. Emva koko siza kwabelana nawe encinci Ukukhetha iifonti Eyona nto inomtsalane kwaye ibalaseleyo kunazo zonke kukuba ziyafumaneka simahla.
Kuyacetyiswa ukuba uneebhanki zomthombo ezikhoyo kwaye uzifikelele rhoqo. Imizekelo elungileyo yiFonti yeSkirrel, iifonti zikaGoogle okanye ezifanayo. Ngokubanzi, kwezi ntlobo zeebhanki, unokuzifumana ngokulula ezi ntlobo zemithombo yolwazi kuba zibekwe ngokweemenyu eziphambili.
IGothic Ultra OT
Iskripthi sikaAdine Kirnberg
Ngaba ukhe wayisebenzisa nayiphi na ifonti ebhalwe ngesandla kwiiprojekthi zezazisi zakho ezihlanganayo? Ndixelele kwi icandelo lokuphawula kwaye wabelane ngomsebenzi wakho nathi ukuba unqwenela!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezingama-25 zecalligraphy
Ukugqwesa bendisele ndidiniwe kukukhangela kwezi ntlobo zemithombo, enkosi kakhulu.
ngokugqwesileyo, ndenza izimemo zomtshato kwaye oku kuhle, enkosi kakhulu
Enkosi ngokukhetha kodwa, ngokwemigangatho esemgangathweni, kukho ezimbalwa ezishiyekileyo ... ndiyakuxelela njengomyili kunye nomthandi wokuchwetheza.
Ogqwesileyo !!. Enkosi.